Chest X-Ray (ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Chest X-Ray (ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း)
Khine Phoo Ngon မှ ရေးသားသည်။ 12/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Chest X-ray (ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း )ဆိုတာဘာလဲ?
Chest X-ray ဆိုတာ နှလုံး၊ အဆုတ်၊ လေပြွန်၊ သွေးကြောတွေနဲ့ lymph nodes တွေကိုပြတဲ့ ရင်ဘတ်ရဲ့ ပုံရိပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဟာ ရင်ရိုးခွေ၊ နံရိုး၊ ညှပ်ရိုး နဲ့ ကျောရိုးအပေါ်ပိုင်း အပါအဝင် ကျောရိုးတွေ နဲ့ ရင်ဘတ်မှာရှိတဲ့ အရိုးတွေကိုလည်း ပြနိုင်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း ဟာ ရင်ဘတ်အတွင်းရှိ ပြသနာတွေကို ရှာဖွေဖို့ အတွက် အသုံးများတဲ့ ဓါတ်မှန်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဟာ သင့်ခန္ဓါကိုယ် အတွင်းက အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ အစိတ်အပိုင်းတွေကတော့
သင့် အဆုတ်ရဲ့ အခြေအနေ။ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကနေ ကင်ဆာ၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ (သို့) အဆုတ်ပတ်လည်နေရာတွေမှာ လေတွေစုနေခြင်း စတာတွေကိုလည်း စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။ emphysema (သို့) cystic fibrosis စတဲ့ နာတာရှည်ဖြစ်တဲ့ အဆုတ်အခြေအနေတွေ အပြင် အဲဒီ အခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေ ကိုပါ ပြနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးနဲ့ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်နေတဲ့ အဆုတ်ပြသနာတွေ။ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဟာ နှလုံးပြသနာကနေ အစပြုလာတဲ့ အဆုတ်ထဲက ပြသနာတွေ၊ ပြောင်းလဲမှုတွေ ကိုလည်းပြနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- နှလုံး အလုပ်မလုပ်တော့ တဲ့ congestive heart failure ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ pulmonary edema လို့ခေါ်တဲ့ အဆုတ်ထဲမှာ ရေတွေ ဖြစ်နေခြင်း။
သင့် နှလုံးရဲ့ အရွယ်အစား နဲ့ ပုံစံ။ နှလုံးရဲ့ အရွယ်နဲ့ ပုံစံတွေမှာ အပြောင်းအလဲရှိနေရင်တော့ နှလုံး အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း၊ နှလုံးပတ်လည်တွင် အရည်များစုနေခြင်း၊ (သို့) နှလုံးအဆ့ိုရှင် ပြသနာ၊ စတာတွေဖြစ်နေတာကို ပြနိုင်ပါတယ်။
သွေးကြောများ။ နှလုံး အနီးနားမှာရှိနေတဲ့ သွေးကြော အကြီးတွေ( aorta နဲ့ pulmonary arteries & veins) ကိုရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း မှာ မြင်နိုင်တဲ့ အတွက် သွေးလွှတ်ကြောမမှာ ဖောင်းနေတာတွေ၊ အခြား သွေးကြော ပြသနာတွေ နဲ့ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါတွေ ကို ထုတ်ဖော်နိုင်ပါတယ်။
ကယ်ဆီယမ် စုပုံနေခြင်းများ။ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဟာ သင့်နှလုံး (သို့) သွေးကြောတွေမှာ ကယ်ဆီယမ်ရှိ၊ မရှိကို စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကယ်ဆီယမ်တွေ ရှိနေရင်တော့ နှလုံးအဆို့ရှင်၊ နှလုံးသွေးလွှတ်ကြော၊ နှလုံးကြွက်သား၊ (သို့) နှလုံးကို ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ အိတ် စတာတွေ ပျက်စီးနေတာကို ဖော်ပြပါတယ်။ အဆုတ်ထဲမှာ ကယ်ဆီယမ်တွေ ပုံနေတာမျိုးကတော့ အရင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျိုးခြင်းများ။ နံရိုး (သို့) ကျောရိုး ကျိုးခြင်း (သို့) အခြား အရိုးပြသနာတွေကိုလည်း ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကနေ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ပြီး ပြောင်းလဲခြင်းများ။ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဟာ ရင်ဘတ်မှာ ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုခု(ဥပမာ- နှလုံး၊ အဆုတ်(သို့)အစာရေမြို ခွဲစိတ်မှု) လုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုကို စစ်ဆေးဖို့ အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ခွဲစိတ်မှုအတွင်းမှာ ထည့်ထားတဲ့ ပြွန်တွေမှာ လေထွက်နေတာတွေ၊ အရည်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေ၊ (သို့) လေတွေ ဖြစ်လာတဲ့နေရာတွေကို စစ်ဆေးဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။
A pacemaker; defibrillator (သို့) catheter ။ A pacemaker; defibrillator တွေမှာ နှလုံးကို တွယ်ဆက်ပေးပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းတွေနဲ့ ခုန်တဲ့ စည်းချက်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ leads လို့ခေါ်တဲ့ ဝိုင်ယာကြိုးတွေရှိပါတယ်။ catheters တွေကတော့ သေးငယ်တဲ့ပြွန်လေးတွေ ဖြစ်ပြီး ဆေးတွေကို ပို့ဆောင်ဖို့(သို့) စစ်ထုတ်ဖို့ အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီလို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာတွေအားလုံး ကို မှန်မှန်ကန်ကန် တပ်ဆင်နေရာချ ထားပြီးမှ ရင်ဘတ် ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံရိပ်နှစ်ခုကို ရိုက်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခုက ရင်ဘတ် အနောက်ပိုင်းကနေ ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ ဘေးဘက်ကနေရိုက်ယူပါတယ်။ အရေးပေါ်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်တော့ အရှေ့ကနေ ဓါတ်မှန် ပုံရိပ် တစ်ခုပဲ ရိုက်ယူလေ့ရှိပါတယ်။
သင့်မှာ နှလုံး (သို့) အဆုတ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ရောဂါတွေရှိနေတယ်လို့ ဆရာဝန်က သံသယရှိတယ်ဆိုရင် တော့ ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်ရနိုင်တဲ့ စစ်ဆေးချက်က ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကုသမှုကို ဘယ်လိုတုန့်ပြန်နေတယ်ဆိုတာ စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာ အောက်ပါ ရောဂါ လက္ခဏာတွေရှိနေပါက ဆရာဝန် အနေနဲ့ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်မှာ တစ်ခုခု ဒဏ်ရာရပြီး နာကျင်ခြင်း။( နံရိုးကျိုးခြင်း (သို့) အဆုတ်ပြသနာတွေ ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်ရင်) (သို့) နှလုံးပြသနာများ။
သင့်မှာ တီဘီ၊ အဆုတ်ကင်ဆာ၊ (သို့) အခြား အဆုတ်၊ရင်ဘတ် နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ရဲ့ လက္ခဏာတွေရှိနေရင် လည်း ဒီ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရနိုင်ပါတယ်။
မလုပ်ဆောင်ခင် သိရမယ့် အချက်များ။
ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကို မလုပ်ဆောင်ခင် ဘာတွေ သိထားသင့်သလဲ?
ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကနေ ပြသနာ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုရှာဖို့ ဆရာဝန်တွေ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ကို အမြဲတမ်း မရတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းရဲ့ အဖြေရလဒ်တွေက ပုံမှန်မဟုတ်ရင်၊ (သို့) ပြသနာအတွက် လုံလောက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို မပေးဘူး ဆိုရင် ပိုပြီးတိကျတဲ့ ဓါတ်မှန် (သို့)ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်၊ အာထရာဆောင်း၊ နှလုံးအက်ကိုးရိုက်ခြင်း (သို့) သံလိုက်ဓါတ်မှန် ကဲ့သို့သော အခြားစစ်ဆေးချက်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
သင့် ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရလဒ် အဖြေက အရင် စစ်ဆေးချက်တွေနဲ့ ကွာခြားနေနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သင်ဟာ မတူညီတဲ့ ဆေးဌာန (သို့) မတူညီတဲ့ စစ်ဆေးချက် တွေလုပ်ဆောင် တာဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
တစ်ချို့သော အခြေအနေတွေ( ကင်ဆာ အသေး၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ ပြုတ်ထွက်လာသောသွေးခဲ (သို့) အခြား ပုံမှန် ကိုယ်တွင်း အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားသလို ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာတွေ) က ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းမှာ မပြနိုင်ပါဘူး။
Asbestos(မီးခံကျောက်ပြား) တွေနဲ့ ထိတွေ့ နေရတဲ့ အချို့ အလုပ်သမားများအတွက်ကတော့ asbestos ကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြသနာတွေကို စစ်ဆေးဖို့ ပုံမှန် ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း အတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားရမလဲ?
ဒီစစ်ဆေးချက်အတွက် အထူးတလည်ပြင်ဆင်စရာတော့ မရှိပါဘူး။
အဝတ်အစား တစ်ချို့ (သို့) အားလုံးကို ဖယ်ရှားပြီး စစ်ဆေးချိန်မှာ ဝတ်တဲ့ အဝတ်ကို ဝတ်ဆင်ဖို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်မှန် ပုံရိပ်တွေမှာ အနှောက်ယှက်ပေးနိုင်တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာတွေ၊ သွာစွပ်တွေ၊ မျက်မှန်တွေ၊ သတ္တု ပစ္စည်းတွေ၊ (သို့) အဝတ်အစားတွေကို ဖယ်ဖို့ လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေရှိနေရင် သမားတော်(သို့) ဓါတ်မှန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို ပြောပြထားရပါမယ်။ အများစုသော ပုံရိပ်သုံးတဲ့ စစ်ဆေးချက်တွေကို ဗိုက်ထဲက ကလေးလေးဆီ ဓါတ်ရောင်ခြည်တွေ မထိရအောင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ မလုပ်ဆောင်ပါဘူး။
ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုရင်တောင် ကလေးဆီ ဓါတ်ရောင်ခြည်ရောက်ရှိမှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် ဆောင်ရမယ့် အချက်တွေ၊ ရှောင်ရမှာတွေ လိုက်နာပြီး လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နေစဉ်ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ?
ပုံရိပ်တွေရဖို့ ဓါတ်မှန်ရိုက်ရာမှာသုံးတဲ့ အပြားရဲ့ အရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ်နေရပါမယ်။ ထိုင်ဖို့ (သို့) လဲလျောင်းဖို့ လိုအပ်လာရင် မှန်ကန်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်ဖို့ အတွက် တစ်စုံ တစ်ဦးက ကူညီပါလိမ့်မယ်။
ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်နေစဉ်မှာ ဝါးတဲ့ပုံရိပ်တွေ မဖြစ်လာရအောင် သေချာ ငြိမ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဓါတ်မှန်ပုံရိပ် ရိုက်ယူနေစဉ်မှာ အသက်ရှုတာကို စက္ကန့် အနည်းငယ်လောက် အောင့်ထားဖို့ လိုနိုင်ပါတယ်။
ဆေးရုံ အများစု နဲ့ ဆေးခန်းတစ်ချို့မှာ သယ်ဆောင်သွားနိုင်သော ဓါတ်မှန်စက်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီ ဓါတ်မှန်စက်တွေနဲ့ ဆေးရုံကုတင်ဘေးမှာ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဓါတ်မှန် နည်းပညာရှင် နဲ့ သူနာပြုက မှန်ကန်တဲ့ အနေအထားရအောင် ရွှေ့ဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အရှေ့ဘက်မှ ဓါတ်မှန်ပုံရိပ် တစ်ခုသာ ရယူပါတယ်။
ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပြီးရင် ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ?
ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ပြီးတာနဲ့ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။ သင့် ဆရာဝန် ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ အတွက် ဓါတ်မှန်ရလဒ် အဖြေတွေက သိပ်မကြာဘဲ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဖို့ နောက်ထပ် ရက်ချိန်းလိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဘာကြောင့် နောက်ထပ် စစ်ဆေးဖို့ ချိန်းရသလဲဆိုတာ အတိအကျ ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
သင့်မှာ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မေးစရာ အချက်တွေ ပိုပြီးရှိနေပါက ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ညွှန်ကြားချက်တွေ ရယူနိုင်ပါတယ်။
စစ်ဆေးချက် ရလဒ် အဖြေက ဘာကိုဆိုလိုသလဲ?
အရေးပေါ် အခြေအနေဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်က ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ အတွက် ဓါတ်မှန် အဖြေက မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းပုံမှန် ရလဒ် အဖြေများ။
အဆုတ်တွေက ပုံမှန် အရွယ်အစား၊ ပုံစံ ရှိပြီး အဆုတ် တစ်ရှုးတွေကလည်း ပုံမှန်ဖြစ်နေခြင်း။ အဆုတ်အတွင်း ကြီးထွားမှုတွေ၊ အခြား အစိုင်အခဲတွေ မတွေ့ရခြင်း။ pleural space လို့ခေါ်တဲ့ အဆုတ်ကို ဝန်းရံထားတဲ့ ပတ်ပတ်လည်နေရာ ကလည်း ပုံမှန်ဖြစ်နေခြင်း။
နှလုံး ကလည်း ပုံမှန် အရွယ်အစား၊ ပုံစံ၊ ဖြစ်နေပြီး နှလုံး တစ်ရှုးတွေက ပုံမှန်ဖြစ်နေခြင်း။ နှလုံးမှ (သို့) နှလုံးသို့ သွားတဲ့ သွေးကြောတွေကလည်း အရွယ်အစား၊ ပုံစံ ပုံမှန်ဖြစ်နေခြင်း။
ကျောရိုး၊ နံရိုး အပါအဝင် အရိုးတွေကလည်း ပုံမှန်ဖြစ်နေခြင်း။
ရင်ဝန်းခြား ကြွက်သား ကလည်း ပုံစံနဲ့ တည်ရှိရာနေရာ ပုံမှန်ဖြစ်နေခြင်း။
ပုံမမှန်တဲ့ လေ(သို့) ရေစုနေခြင်းတွေ မတွေ့ရခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်ပြင်ပ ပစ္စည်းတွေ မတွေ့ရခြင်း။
ပြွန်အားလုံး၊ catheters (သို့) အခြား ဆေးပညာသုံးကိရိယာတွေ ကလည်း ရင်ဘတ်အတွင်း မှန်ကန်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေခြင်း။
ပုံမှန် မဟုတ်သော အဖြေရလဒ် များ။
နမိုးနီးယား ၊ TB ကဲ့သို့ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း များရှိနေခြင်း။
အကျိတ်၊ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ကဲ့သို့သော ပြသနာများ၊ နှလုံးအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း မှ ဖောယောင်သော အခြေအနေ တွေ့ရခြင်း။
တစ်ချို့သော အခြေအနေတွေမှာ ပြသနာကို ရှင်းလင်းစွာ သိနိုင်ဖို့အတွက် နောက်ထပ် ဓါတ်မှန် (သို့) အခြား စစ်ဆေးချက်တွေ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ နှလုံးပျက်စီးခြင်း၊ နှလုံး အဆို့ရှင် ရောဂါများ၊ (သို့) နှလုံးပတ်လည် အရည်များစုနေခြင်း စတာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ နှလုံးကြီးနေခြင်း ကဲ့သို့သောပြသနာများ ရှိနေခြင်း။ (သို့) သွေးလွှတ်ကြောမ ကြီးနေခြင်း၊ ဖောင်းနေခြင်း၊ သွေးလွှတ်ကြောတွေ မာနေခြင်း( သွေးကြောကျဉ်းခြင်း) စတဲ့ သွေးကြောပြသနာများ တွေ့ရခြင်း။
အဆုတ်အတွင်း မှာ အရည်များတွေ့ရခြင်း။ (သို့) အဆုတ်ပတ်လည်မှာ အရည်များစုနေခြင်း၊ အဆုတ်ပတ်လည် နေရာများတွင် လေများ တွေ့ရခြင်း။ နံရိုးခွေ၊ ညှပ်ရိုး၊ ပုခုံးရိုး (သို့) ကျောရိုးများတွင် အရိုးများကျိုးနေခြင်းကို တွေ့ရခြင်း။
Lymoh nodes (အကျိတ်)များကြီးနေခြင်း။ ခန္ဓါကိုယ်ပြင်ပ ပစ္စည်းများ ကို အစာရေမြို၊ အသက်ရှုပြွန် (သို့) အဆုတ်တွေမှာ တွေ့ရခြင်း။ ပြွန်အားလုံး၊ catheters (သို့) အခြား ဆေးပညာသုံးကိရိယာတွေ က မှန်ကန်တဲ့ နေရာမှာ မရှိဘဲ ရွေ့နေခြင်း။
ဓါတု စစ်ဆေးခန်းတွေ နဲ့ ဆေးရုံတွေအပေါ်မူတည်ပြီး ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန် ရိုက်ခြင်း အတွက် ပုံမှန်ပမာဏ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ စစ်ဆေးချက် အဖြေအတွက် မေးစရာရှိပါကဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Chest X-ray. http://www.webmd.com/heart-disease/chest-x-ray?print=true . Accessed Jul62016
Chest X-ray. http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/chest-x-rays/basics/results/prc-20013074. Accessed Jul62016
X-ray (Radiography) – Chest. http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=chestrad#part_three. Accessed Jul62016